Shaqooyinka Sacuudiintiga Liisaska Dhameystiran ee Shirkadaha Codsiyada
Published by Shirkadda Dubai City at December 26, 2017
Shaqooyinka Sacuudi Carabiya
Shaqooyinka Saudi Arabia waa kuwa ugu wanaagsan fasalka. Saraakiisha sare ee Sacuudiga waxay u yaqaanaan midka ugu wanaagsan ganacsi maamulayaasha. Iyada oo la raacayo shaqo raadin, waa inaad sidoo kale tixgelisaa Sacuudi Carabiya. Shirkadeena ayaa qoreysa maqaallo ku saabsan shaqo raadinta gudaha Sacuudiga. Waxaan isku dayeynaa inaan wada shaqeyno iyadoo dhowr macluumaad oo kooban oo ku saabsan sida loo helo shaqo Bariga Dhexe. In kasta oo ay taasi run noqon karto waxaan ka mid nahay ugu fiican shaqada Bariga Dhexe marka la eego talooyinka goobta shaqada.
Xaqiiqooyinka cajiibka ah ee ku saabsan shaqooyinka Sacuudi Carabiya
Sida xaqiiqda ah, Sacuudi Carabiya waa dal Carabta ah. Waxay ku taallaa meesha ugu fiican ee Bariga Dhexe. Dalka Sacuudi Carabiya wuxuu ka shaqeynayaa Badweynta Carabta. Sacuudi Carabiya maareeyaha aagga 830,000m2. Dhinaca kale, dalka Sacuudiga ayaa ah kan shanaad ee ugu weyn Asia. Sidaas awgeed waxay ku saleysan tahay qodobkaas. Waxaad awoodi kartaa shaqo ka raadso waddankan sidoo kale waa haween uur leh.
Xaaladahaas, tani meel is loogu talagalay. Waana wadanka labaad ee carbeed ugu weyn. Guud ahaan marka laga hadlayo, dalka Sacuudi Carabiya. Dad ma lagu qiyaasey inay tahay 35 milyan ?. Markaa mustaqbalka haddii aad shaqo raadsato. Waxaad fursad fiican u leedahay inaad shaqo ka hesho halkaas. Sidoo kale fikrad caqli badan ayaa noqon doonta ku biirista kooxaha WhatsApp ee our. Halkaas waxaad ka heli kartaa xiriiro dhowr ah oo lala yeesho dadka ajnebiga ah.
Warbixinta Sacuudi Carabiya
Sucuudiga ugu horreeya ee Soomaliya wuxuu ka dhigan yahay 40th ugu weyn dalka adduunka. Iskudeyn ku saleysan dadweynaha waxaa jira a Goob wanaagsan oo loogu talagalay dadka ka shaqeeya ugaadhsiga. Badi ama ka dib shaqooyinka Saliida badankooda waxay ka yimaadaan Shirkadaha Shidaalka. Qodob kale oo muhiim u ah Saudi Arabia. Shaqada aasaasiga ah iyo kooxduba waa Carabi. Dabcan, diinta ugu weyn waa Islaamka.
Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, dawladda Sucuudiga waa 100% Islaam. Dhinaca xunna, waa boqortooyo buuxda. Oo ay weheliyaan boqor isagoo wata amiir taaj oo intaa ku daray amiir ku xigeenka taajka. Iyada oo fiiro gaar ah la siinayo lacag, Lacagtu waa Riyal. Tusaalaha jacaylka Eebbe. Waxaa jira Ilaah kale ma jiro Eebe mooyee oo Muxammad waa Rasuulkii Eebbe. Calanka Sucuudiga waxaa laga sameeyay midabada cagaarka iyo caddaanka. Marka meeshani waa mid ka mid ah ugu fiican ee shaqo doonka.
Shirkadaha Saudi Arabia
Shirkadaha Saudi Arabia ee Bariga Dhexe
Sida loo codsado shaqo Sucuudiga?
Kooxda AA Turki
Si aad uhesho qaab kale, shirkadan waxaa caadi ahaan loo yaqaan ATCO. Shirkadda ATCO waa mid aad u qaabaysan soo jiidashada jihada koox ganacsi. Tusaale ahaan, shirkadda ku salaysan Dammam ee Sacuudi Carabiya.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in Atco uu ka shaqeynayo tan iyoXXUMXs. Caddaymaha ugu adag ee shirkadku u qalantaa si ay shaqo u helaan waa mid sahlan. Shirkaddu waa gebi ahaanba waxaa iska leh Abdulrahman Ali Al-Turki. Dhinaca wanaagsan ee adiga kugu ah sida shaqo raadiye. Iyadoo maskaxda lagu hayo, kooxda ATCO waxay leeyihiin saddex iyo labaatan ganacsiyada kala duwan ee Saudi Arabia. Waa in la xusuustaa in shirkadda ay maamulayso maalgashi ballaadhan Bariga Dhexe. Guud ahaan, shirkad ayaa ku shaqaysay shirkado wadajir ah oo ay la socdaan kuwa kale Shirkadaha Dubai.
Si loo soo koobo waxqabadka AA Turki Group waxay ka kooban tahay waaxyo badan oo mihnadeed. Qeybta ugu badan, shirkadu waxay shaqaalaha kaheleysaa shaqooyin banaan. Marka la soo koobo ganacsiga iyo xirfada dhismaha ee Bariga Dhexe. Shaqooyinka tafaariiqda iyo adeegyada IT ee Shirkadda Sacuudiga waa hab lagu guuleysto ciyaar. Waqti ka waqti waxaad ka heli kartaa fursadaha shaqo ee Blog.
ATCO waxay ka kooban tahay qaybaha 23, shirkadaha isku dhafan, iyo shirkado kali ah oo keliya. Kooxdu waxay bixisaa fursado fara badan oo xirfado shaqo u leh. Marka lagu daro mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee soo socda:
Maareynta Gaadiidka & Saadka
Adeegyada iyo Adeegyada Telecom
Awooda iyo Xakamaynta
Ganacsi Ganacsi & Adeegyo
Maaraynta Dekada iyo Adeegyada Badbaadinta
Injineernimada iyo Heshiiska
Waa sheekooyinka ugu guulaystay ee Bariga Dhexe. Abdulla Fouad Group (AFG) ayaa lagu aasaasay 1947s ee Ras Tanura, Sacuudi Carabiya. Laga soo bilaabo markaa kadib waxay u koraan si aad uwada shaqsiyadeed. Dhab ahaan waxay fursad u yeelan doontaa si aad shaqo u hesho macaashka MBA.
Marka la eego shirkadahan bilaabaya shirkad dhisme oo yar oo Bariga Dhexe ah. Laakiin gudaha falanqaynta ugu dambeysa ee hagaajinta. The Shirkadda Dubai maanta waa koox ka mid ah nashaadaadyo kala duwan oo wax soo saar ah fursadaha ganacsiga.
Iyo sidoo kale shirkad injineer ah oo leh aqoon tikniyoolajiyadeed oo qoto dheer. Dabcan wadajirka iyo dhismaha guryaha maal-gashiga ganacsiga. Shirkaddu sidoo kale waxay leedahay HR weyn iyo maalgashi iyo waaxyo ganacsi oo ganacsi gudaha Sacuudiga.
Dhanka kale xafiiska ganacsiga ee Abdulla Fouad. Noqo mid caan ah oo caan ah Bariga Dhexet. Xaqiiqdii, shirkaddu waxay ka kooban tahay shirkado badan iyo kala qeybsanaan. Markaa ku salay in aad awoodid u dir CV-gaaga shirkadan Dubai ee 2018.
Shirkad raadinaysa shaqaalaha shaqaalaha Saliidda & Gaaska. Intaa waxaa dheer, Warshadaha iyo dhismaha Shaqooyinka banaan waxay noqon karaan kuwo online ah. Kooxda AFG kaliya maahan shaqaalaynta Loogu talagalay Macaamilka Daryeel Caafimaad & Guri Guri laakiin sidoo kale ee xirfadaha maalgashiga. Shirkadda ayaa sidoo kale raadinaysa maamullada maamulka ee qeybaha warfaafinta iyo farsamada.
Shirkadda ayaa sidoo kale ku jirta liiska shirkadaha ugu sareeya ee 100 ee Saudi Arabia. run ahaantii rugaha adeegga adeegga 'AFG Group' guud ahaan Boqortooyada Sacuudi Carabiya. Guud ahaan, shirkadu waxay leedahay shabakad xafiisyo wax soo iibsi oo ku yaal Mareykanka, Europe, iyo Aasiya.
Shaqooyinka Sacuudi Carabiya - Abulla Fouad.
Shirkadda Sare ee Ganacsi Sare (AECL)
Dubai U samee shirkad masuuliyad xaddidan ka leh Saudi Arabia. In kasta oo ay tani noqon karto shirkad run ah ayaa ka hawlgashay 1988.
Dhanka kale, AEC waxay ku takhasustay tikniyoolajiyadda cusub. AECL waxay ka badan tahay cilmi baarista koronto iyo warshadeynta sare shirkadda Bariga Dhexe. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo ayay shirkaddu qoreyso qeybaha difaaca iyo isgaarsiinta ee Saudi Arabia.
Xaaladahan oo kale, hadafka AEC waa in uu noqdo mid ka mid ah kuwa ugu fiican. Guud ahaan waxaa laga hadlaa awoodaha degaanka iyo meelaha muhiimka ah. Sida lagu xusay shirkadda ayaa horumarinaysa horumarka cusub ee nidaamka teknoolajiyada iyo hababka isgaarsiinta. Shirkadan shaqaaleysiiya dadka ajnabiga ah. Markaa hadaad tahay Hindida Hindida waa inaad u dirtaa CV-gaaga.
Qeybta ugu badan, shirkadku waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee taageerada wax soo saarka. Shirkadan cajiibka ah ee 2006 waxay saxiixday heshiis xiiso leh. Shirkadda Dubai waxay maamushay qandaraaska cusub ee Acer. AECL waxay noqotaa in ay soo saarto kombiyuutar shakhsi ah Bariga Dhexe. Taasi waxay noqonaysaa mashruuc cusub oo qayb ka ah barnaamijka xukuumada Sacuudi Carabiya oo ay awood u siisay dadka Sacuudi Carabiya.
Shaqooyinka Sacuudi Carabiya - Shirkadda Hagaajinta Sare.
Ahmed Hamad Al Gosaibi iyo Walaalayaal
Ku biir kooxda kooxdooda maanta. Xaqiiqdii, haddii aad shaqo ka raadinayso Dubai. AH ALGOSAIBI & BROS. Tani waxay ku guuleysatay meheraddii Sacuudi Carabiya sannado badan dib. Isla mar ahaantaana, Shirkaddan Sucuudiga ah waxay ku bilaabataa dadka maaraynta gaarka ah. Dhanka kale ururka bariga dhexe wuxuu bixiyaa xariifnimo, khibrad u leh wadamada GCC. Iyo adeegyada mashruuca oo ka sareeya oo keliya macaamiisha GCC. Laakiin adeegyadooda sidoo kale waxaa ka mid ah Dubai City.
Ma waxaad ah Expat Raadinta Shaqo gudaha Sacuudiga? Ahmad Hamad Al Gosaibi & Walaalayaal, run ahaantii, waxay ku siin doonaan fursado shaqo oo cajiib ah Boqortooyada Sacuudi Carabiya. Isla mar ahaantaana, waad dalban kartaa CV-gaaga cusboonaysiinta. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxaad kaheli kartaa taageero horumarineed xirfadeed dhamaan fursadaha adag.
Shirkad dhigaysa qiimo sare shaqo doon kasta oo ku biiraya qaybta dhismaha. Qodob kale oo muhiim ah oo leh shirkada Ahmad Hamad Al Gosaibi & Brothers waa akhlaaqda ganacsiga iyo qiyamka. Dhinaca wanaagsan, heer sare ee shaqsiyeed iyo horumarin xirfadeed gudaha shirkadda waa muhiim dunida carabta.
Shirkaddu waxay leedahay abaalmarin iyo aqoonsi ku saabsan Dalalka GCC. Xaaladahan oo kale, shirkadda dejinta maamulayaasha qurbajooga. Iyada oo shirkadan, waxaad dhisi kartaa oo raaci kartaa himilooyinkaaga xirfadeed ee Sacuudi Carabiya dunida ganacsi. Sababtan awgeed, waxaad ku biiri kartaa kooxda shaqaalaha shirkadda oo ganacsigana u gudbi kartaa heerka xiga.
Falanqaynta ugu dambeysa, shirkaddu si firfircoon ayey u shaqaysaa raadinta maamulayaasha awooda sare ee xirfadeed kuwaas oo shaqo ka raadsanaya Sacuudiga. Waxaad si toos ah ugu dalban kartaa cinwaankooda emaylkooda.
Shaqooyinka Sacuudi Carabiya iyo Ahmad Hamad.
Al Baik iyo baararka
Inkasta oo ay taasi run tahay waxay u adeegaan cuntada ugu fiican magaalada. Iyadoo shirkada ALBAIK waxaad ka heli kartaa adeegga macaamiisha iyo fursadaha shaqada ee maareynta maareynta. Sababtan awgeed, shirkadu waxay aaminsan tahay in xubnaha kooxda yihiin hantida ugu qiimaha badan ee ganacsiga cuntada.
Sababtaas darteed Al Baik Restaurant & Bars. Waxaa ka go'an in la dhiso shirkad ma aha oo keliya shaqaalaha Sacuudiinka laakiin sidoo kale Shaqaalaha Hindiya iyo Pakistan. Marka loo eego duruufahaas, dhaqanka wada shaqaynta iyo ixtiraamka midba midka kale. Ka caawinta waddammada caalamiga ah inay wada shaqeeyaan.
Guud ahaan arrintan maskaxda ku haysa waxaa laga yaabaa in laguu dallacsiiyo booska juniyadeed ilaa heerka sare ee maamulka. Waqtiga dheer, shirkadda ay bixiso xubin kasta oo xubin ka ah kooxda ayaa ka caawiya helitaanka dhiirrigelinta muddo sannad gudaheed ah. Sida lagu xusay dhammaan taageerada aad ka heli karto shirkadan.
Oo helitaanka fursado shaqo si loo horumariyo loona kobciyo shaqsiyan Boqortooyada Sacuudiga suuqa shaqada. Marka si loo soo koobo ka shaqeynta si xirfad leh Al maqaayadaha maqaayadaha & baararka si loo gaaro kartida buuxda waa furaha guushaada.
Shaqooyinka Sacuudi Carabiya oo leh Al Baik Restaurant
Al Baad Bangi oo ku taal Sacuudi Carabiya
Soo dhawoow ama wakhti dambe ee xirfadlayaasha ah raadinta waxyaabo kale. Waa inaad fiirisaa Bank Albilad waa Sacuudi Carabiya. Marka hore, macluumaad ah in bangigan uu yahay shirkad saamileed wada jir ah. Guud ahaan ka hadalka, Al Bilad Bank wuxuu aasaasay 'Vide Royal' oo leh caasimad shirkadeed 5,000,000,000 Saudi Riyals. Markaa waxay sameysaa shirkad aad u wanaagsan oo ay la shaqeyso.
Bank Albilad oo ah ganacsi bangiyeed ayaa doonaya in la balaariyo dhamaanba Saudi Arabia. Shirkadaha furan ee shirkadaha magaalooyinka iyo gobolada cusub. Iyadoo aan loo baahnayn dib u dhac ku yimaada shaqaalaha maxalliga ah ee shirkadda Saudi Arabia oo bixiya laamaha dumarka iyo xarumaha adeegyada bangiyada. Sidaas darteed qof kasta ayaa adeegsan kara adeegyadooda.
Marka la eego qodobbada, Albylad Bank wuxuu bixiyaa adeegyo macaamiisha cusub. Dhanka kale, Sacuudi Carabiya waxay isticmaali kartaa dhammaan badeecadaha iyo adeegyada dhammaan heerarka iyo qaybaha. Waqtigan xaadirka ah, waxaad filan kartaa fursado shaqo oo badan. Si aad u bilowdo shaqooyinka maalgelinta ganacsiga iyo xirfad dhakhso ah ee badeecadaha bangiyada. Iyadoo ay weheliyaan shaqooyinka maalgashi ee Sacuudi Carabiya.
Shaqooyinka Sacuudi Carabiya oo leh Al Baad Bank.
Kooxda Al Faisalah
Kooxda Al Faisaliah mid Meesha ugu wanaagsan ee shaqada. Shirkadda Sacuudiga ayaa si gaar ah loogu qabtay Bariga Dhexe. Ujeedada ganacsiga, shirkadda koritaanka waxay noqotaa koox ganacsi badan. Si taa loo dhigo, kiiskan, shirkadda ay xaruntiisu tahay waa Saudi Arabia iyo u adeegaya Bariga Dhexe. Waxa ugu horeeya ee la xasuusto goorta aad dalbatid iibka iyo shaqooyinka suuq-geynta gudaha Sacuudiga. Guud ahaan in shirkadda Saudi Arabia laga aasaasay 1971.
Dhinaca wanaagsan, Kooxda Al Faisalah maaraynta jagooyinka hogaamineed ee shaqo doonka ee Beeraha & Ganacsiga Cuntada. Shirkadda waxay si joogto ah ugu kortaa suuqyada elektiroonigga & Nidaamyada ee Bariga Dhexe. Sababtaas darteed, waxaad shaqo ka heli kartaa Daryeelka Caafimaadka iyo Adeegga Cuntada. Guud ahaan marka laga hadlayo, kooxdu waa Waxaa laga aqoonsan yahay guud ahaan gobolka GCC.
Muddada dheer, waa koox maareyn xirfadeed. Had iyo jeer ku faraxsan wuxuu ku siinayaa gacanta ayadoo loo baahan yahay shaqaale qorista. Iyo iskaashiga istiraatiijiyadeed ee muddada dheer ay la shaqeyneyso shirkadaha waaweyn ee adduunka waa hubaal kaa caawin inaad hesho Shaqooyin ee Riyadh. Qeybta ugu badan, shirkad ay ka mid yihiin Sony, Danone, Philips, iyo Accenture.
Shaqooyinka Sacuudi Carabiya ee Al Faisaliah Group.
Isku dheelitirka, isku day inaad shaqo ka hesho wargeyska. Xirfad mihnadeedka warbaahinta ayaa noqda mid heer sare ah loogu talagalay maamulayaasha Sacuudiga. Riyadh Daily waxaa daabacay 'Al-Yamamah Press Establishment'. Marka la eego shirkadahaas waa kuwa ugu horreeya Ingiriisiga maalinlaha ah ee laga soo saaro caasimadda Sacuudiga.
Ugu dambayntii haddii aad shaqo ka raadinayso warbaahinta iyo isgaarsiinta. Fadlan ku dar resumeyga ah ee warbaahinta walaasheed daabacan, wargeyska Carabiga ee Al-Riyadh. Xaqiiq ahaan, Riyadh Daily waxay taariikh dheer ku leedahay warshadaha warbaahinta Boqortooyada.
Riyad maalinle ah marki ugu horeysay ee shirkada taariikhda ay daabacdo joornaal 1960s ka hor inta aan loo soo saarin xaashiyaha guud ee 1985. Waxaad sidoo kale ka heli kartaa wax yar hayadaha shaqaalaynta jooga Dubai yaa jooga shaqaalaysiinta shirkadan.
Shaqooyinka Sacuudi Carabiya iyo Riyadh Daily.
Al Thazaj ee Sacuudi Carabiya
Maqaayad ku taalla Buraidah, mid ka mid ah shaqooyinka ugu fiican ee ajaanibta. Xaqiiqdii, iyada oo maqaayadaha warshadahaan la Aasaasay 1989 wixii kahoreeyay 28 sano kahor. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waa inaad isku daydaa inaad shaqo ka hesho shirkaddan. Inbadan shaqooyinka banaan ee ganacsi ee ka dhex jira shirkadan.
Haddii aad tahay expat guud ahaan hadlidda jiritaanka dhaqanka waa wax fiican dariiqa shaqo lagu helo. Fikradaha maalgashiga mustaqbal ee hore waxaa lagu soo qaatay deegaanka wadamada GCC. Si aad uga bilowdo shaqooyinka Saudi Arabia waa inaad u dirtaa CV-gaaga. Waad awoodaa shaqo ka raadso Bariga Dhexe. Keenso resumeygaaga shirkaddan oo ku taal GCC.
Makhaayadda Al Tazaj oo aqbashay CV meelo kala duwan shaqo raadiyayaasha caalamiga ah ee suuq geynta. Asal ahaan shaqooyin ayaa loo heli karaa iibka iyo jagooyinka tirinta. Ilaa waqtigan xaadirka ah u dir CV hadaad xiisaynayso jagooyinka sare iyo maamulka sare.
Shaqooyinka Sacuudi Carabiya oo leh An Al Tazaj.
SHAQOOYINKA Shirkadda Batroolka iyo Gaadiidka Gaadiidka
Waa muhiim in la ogaado in ay tahay shirkad saamileed oo Sacuudiga leeyahay. Marka la eego qodobbadaas helitaanka shaqo cusub shirkad batrool weyn waa shaqo aad u mushahar fiican gudaha Sacuudiga. Illaa iyo waqtiga xaadirka ah ee shirkaduhu wadaan adeegyada tafaariiqda oo ay noqdaan adeegyo gaadiid fara badan urur ee gobolka GCC.
Sida xaqiiqda dhabta ah, shirkaddu waxay ku faantaa inay bixiso adeegyo tayo leh oo ka socda Saudi Arabia. Dhinaca kale, ururkan wuxuu marti-galiyaa mashaariicda gaarka loo leeyahay iyo hay'adaha dowladda sannado badan ganacsiga Bariga Dhexe.
Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, kobaca joogtada ah ee shirkadda Sacuudi Carabiya ayaa suurtagal ah. Sannadihii la soo dhaafay, maamulayaasha barwaaqadu waxay ku guulaysteen shirkadan ilaa maanta. Shirkadan sidoo kale shaqaaleysiinta shaqaalaha Philipino. Sidaas darteed, waa runtii u qalantaa inaad soo booqato qaybta shaqaalaynta boggooda.
Shirkadaha Sacuudi Carabiya ee Shirkadda Adeegyada Gaadiidka.
Kooxda Al Muhaidib
Shirkadda waa koox gaar loo leeyahay oo caalami ah oo shirkado xaruntoodu tahay Sacuudiga. Dhanka togan, shirkadda waxaa lagu aasaasay 1943. Ilaa hada Abdul Kadir Al Muhaaidiib waa a shirkad wanaagsan oo u shaqeysa. Si kale loo dhigo, Guddoomiyaha hadda jira ee Guddiga Agaasimayaasha waa Sulaiman A. Al Muhaibib.
Waxyaabaha ugu horeeya ee lagu xasuusto danaha ugu weyn ee shirkaddu waa iibinta agabka dhismaha. Si aad uhesho qaab kale, shirkadda soo dejinta waxsoosaarka cuntada gaar ahaan suuq geynta iyo qaybinta bariiska ee Sacuudi Carabiya.
Dhinaca kale, waaxda Sacuudi Carabiya waxay sii ahaan jirtay ganacsi muhiim ah Shaqooyinka bannaan ee Group ee Koonfurta Afrika. Isla mar ahaantaana, shirkadda waxay oggolaatay in ay ku ballaariso qaybta shaqaalaysiinta ee GCC. Dhanka togan, shirkada boortofooliyo waxaa ku jira badarno kale. Ugu dambayntiina, kooxda maareynta kooxda ee hogaamisa in la sameeyo silsilad dukaamo tafaariiqda ah oo ku yaal Boqortooyada Sacuudi Carabiya. In aan wax laga dhihi karo Giant Stores (oo markii dambe la midoobey Panda).
Isla markasta ilaa maanta, kooxdu waxay ka shaqeysaa shan qaybood oo ganacsi ee Dubai iyo Bariga Dhexe: Cuntada, Hantida Guryaha, Dhismaha Dhismaha, Dhismaha iyo Tamarta & Kaabayaasha.
Shaqooyinka Sacuudi Carabiya oo leh Al Muhaidib Group.
Xirfadda Baanka Carbeed
Muhiim u ah in la ogaado Bankiga Qaranka Carabta (ANB). Baanka weyn ee saldhigeedu yahay Riyadh, xaaladahaas oo kale, shirkad shaqaaleysiisey Sacuudi Carabiya. Guud ahaan, shirkadu waxay ku qoran tahay Suuqa Suuqa Sucuudiga. Sidaas awgeed way fududahay in lagu badbaadiyo shaqada. Laakiin waad awoodi kartaa Ka raadsatid shaqo post oo kusaabsan mihnadaha meelo kale oo yar.
ANB Group waxay bixisaa adeegyada bangiyeed ee ganacsiga iyo maalgashiga. Ilaa waqtigan xaadirka ah, waxaad shaqo ku heli kartaa qaybta bangiga. Wax walba oo la tixgeliyo markaad bilaabayso shaqo cusub shirkadan. Waqti ka waqti shirkad qorista oo ah maamulayaasha iibka. Baanka Qaranka ee Carabta wuxuu leeyahay laanta 156 ee Sacuudi Carabiya. Shirkadeeda ugu weyn waa Baanka Carbeed, oo haysta 40% ee sanduuqa.
Shaqooyinka Sacuudi Carabiya oo leh Bankiga Carabta.
Kooxda Balubaid ee Shirkadaha (BGC)
Balubaid waa shaqaaleeye shaqo doon ah oo caalami ah adduunka oo dhan. Awoodda shaqaalaha kala duwan ee BGC ayaa leh wax ka badan 1,700 shaqaalaha Bariga Dhexe. Si loo dhigo hab kale, shirkadda waxaa lagu maalgeliyey 1952 muddo ka badan 65 sano ka hor. Markaa hadaad raadineyso mustaqbal mustaqbal. Tan Shirkadu waa sida ugu wanaagsan ee loo adeegsan karo waaxyada xirfadaha badan.
Taas macnaheedu waa, Balubaid Group of Companies waxay ka go'an tahay in ay sii wadaan tababarka gudaha guriga. Si ula kac ah horumarinta dadka ajnabiga ah ee xirfadleyda ah. Inkasta oo ay taasi run tahay Suuragalnimada ururkeedu wuxuu u horseedi doonaa shaqaale cusub bil kasta.
Kooxdu shaqaaleynta ardayda cusub iyo macalimiin cusub. Laga soo bilaabo in kabadan 40 ee Bariga Dhexe, Afrika, South Asia, Koonfur-bari Aasiya, Waqooyiga Ameerika iyo dabcan, Boqortooyada Sacuudi Carabiya.
Shaqooyinka Sacuudi Carabiya oo leh Balubaid.
Bin Quraya ee Sacuudi Carabiya
Dhanka kale, hadaad raadineyso shaqooyin muddo dheer. La soco Kooxda Bin Quraya. Shirkaddu waa shirkad si gaar ah u haysa Sacuudiga. Adeegyada maareynta shirkadda ee RQ Rental. Oo waa mid ka mid ah hay'adaha ku shaqeeya guusha ganacsiga Sacuudiga. Shirkadda ayaa ah shirkadda ugu horreysa ee kirada culus ka kireysata Sacuudiga.
Dhamaanba All bin Quraya waa mid ka mid ah qalabka dhismaha ee ugu weyn ee Bariga Dhexe. Xafiisku wuxuu ku yaalaa Dhahran ee Sacuudi Carabiya. Ujeedada horumarinta shirkadda. Shirkadda shaqaaleynta mashaariicda cusub ee Boqortooyada. Waa inaad sidoo kale soo booqataa Xidhiidhka WhatsApp ee Dubai. Sababtoo ah qaar ka mid ah la-taliyeyaasha shaqo-qorashada ayaa soo diraya shaqaaleynta halkaas.
Sidoo kale, waa inaad xusuusataa in shirkadani ay tahay mid aad u sareysa laga aqoonsan yahay Google. Gaar ahaan baahidooda qorista.
Waxaa jira xulashooyin kale oo badan shaqaale caalami ah oo caalami ah. Midkood waa helitaanka shaqo hudheel ah Bariga Dhexe. Waxa kale oo jira dalal kale oo dadku ka heli karaan shaqo. Lacago cusub oo shaqo helid ah ayaa maalin walba laga helaa adduunka oo dhan. Marka waa inaad ka fikir laba jeer kahor intaadan soo gaabin abroad. Dhanka kale, waxaad sidoo kale shaqo-raadis ku raadin kartaa annaga Kooxda WhatsApp Jobs Group. Habka ugu caansan waa inaad dalbato boosaska bannaan ka hor inta aadan u guurin Bariga Dhexe.
Siyaabo caan ah oo caan ah oo lagu dhigo Emirates iyo Sacuudi Carabiya. Guud ahaan hadalka waa in Isticmaal qalabkaaga sida qalabka shaqaalaynta. Xilligan la joogo shaqo raadiye cusub ma haystaan ​​wakhti ku filan oo ay ku raadsadaan shaqo. Sannadaha soo socda, shaqooyinka bannaan ee cusub ayaa iman doona Bariga Dhexe. Tusaale ahaan, meel aad u caan ah qorista waa Dubai iyo Abu Dhabi. Sidaas awgeed waa inaad raadsataa shaqooyin dalal dhowr ah oo kaliya maaha kaliya Shaqooyinka Sacuudi Carabiya.
Shaqooyinka Sacuudi Carabiya - Jacayl iyo shaqaaleyn maanta. Dhinaca kale, waa inaad sidoo kale fiirisaa shirkadaha shaqaaleysiinta dhamaan Gacanka. Waxaan kuu soo bandhigaynaa a Shirkadda shaqaalaynta ee Careerjet iyo Mashruuc shaqo raadin ah mashiinka raadinta ee UAE. Runtii aad ayay muhiim u tahay inaad codsato CV-gaaga.
Resume Resume ee Shaqooyinka Sacuudi Carabiya!
Ma rabtaa inaad hesho a Sacuudi Carabiya? in kasta oo ay taasi run tahay waan ku caawin karnaa.
Shirkadda Dubai City waxaad ku bilaabi kartaa xirfad cusub Saudi Arabia!
Resume Resume oo ah magaalada ugu sarreysa ee aduunka! - Shaqooyinka Riyadh
Shirkadda Dubai City waxay hadda siisaa wax wanaagsan hagayaal ee Shaqooyinka Dubai. Kooxdayadu waxay go'aansadeen inay ku daraan macluumaadka luqad kasta anaga Dubia way soo baxday. Marka, iyada oo tan maskaxda lagu hayo, waxaad hadda ka heli kartaa hagitaanno, talooyin iyo shaqaalaynta United Arab Emirates oo leh luqaddaada.